Shirkadaha Jinka JW 642 (1416133-89-5) hplc x98% | AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / JW 642
Rating: Category: Xabbad dufan leh Tags: iibso JW 642, JW 642, JW 642 iibka, Shirkadaha JW 642
AASraw waxaa leh awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee JW 642 (1416133-89-5), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Endocannabinoids sida 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) iyo arachidonoyl ethanolamide waa lipids firfircoon oo ku lug leh dhowr geedi socod oo isku dhafan oo ay ka mid yihiin waxqabadka xayawaanka cannabinoid. JW 642 waa laf-xannibaad xooggan oo lipase monoacylglycerol (MAGL) oo muujiya qiimaha IC50 ee 7.6, 14, iyo 3.7 nM forMesle MAGL ee moodada, rat, iyo xuubka maskaxda, siday u kala horreeyaan. JW642is xulasho loogu talagalay MAGL, wuxuu u baahan yahay xoogaa sarreeya oo si wax ku ool ah looga hortago dhaqdhaqaaqa hawada amid ah ee hidde-qabadka (IC50s = 31, 14, iyo 20.6 μM loogu talagalay xuubka, jiirka, xuubka maskaxda ee maskaxda).
I.JW 642 Calaamadaha aasaasiga ah:
Nooca Molecular: C21H20F6N2O3
Miisaankani waa: 462.4
Kaydinta Nabadgelyada: at -20 ° C 3 sano Powder
Color: White adag
II. Wareega JW 642
2. JW 642 Isticmaal:
Hababka sheybaarka, ee kaydinta muddada dheer, waxaanu soo jeedinaynaa in JW 642be lagu keydiyay -20 ℃. Waa inay ahaato mid degan ugu yaraan hal sano.
JW 642 waxaa loo bixiyaa xal sida methyl acetate. Si aad u bedesho xalka, si fudud uumi gashiga methyl acetate ka yar socodka qulqulka nitrogen iyo isla markiiba ku dar dheereeya xulashada. Solvents sida asanolol, DMSO, iyo dimethyl formamide oo lagu nadiifiyey gaas geel ah ayaa la isticmaali karaa. Xakamaynta JW 642 ee ku jira kuwan xoojiyay ayaa la rumeysan yahay 13,5, iyo 11mg / ml, siday u kala horreeyaan.
JW 642 si aad ah looma farsamayn karo tuubbooyinka aqueous. Qodobka ugu sareeya ee aqueousbuffers, xalka ethanolic ee JW 642should waa in lagu qasi karaa cirifka aqueous ka codka. JW 642 wuxuu leeyahay xajmiga xNUMX mg / ml ee 0.3: 1 ee ethanol: PBS (pH 2) adoo isticmaalaya habkan. Kuma talineyno inaan kaydino xalalka aqueous in ka badan hal maalin.
3.Waa maxay qiyaasta JW 642?
DMSO ilaa 100 mM
Ethanol ilaa 100 mM
Talada xasiloonida iyo xal-u-helidda: Xalalka qaarkood way adkaan karaan helitaanka oo ay ku dhajin karaan karoon degdeg ah, sonication ama kuleylinta kulka (ee 45-60 ° C biyaha qubeyska). Macluumaadka ku saabsan xasilinta waxsoosaarka, gaar ahaan xalka, marar dhif ah ayaa la soo sheegey, inta badanna waxaan bixin karnaa hage guud. Talooyinkeena caadiga ah waa: SOLIDS: Bakhaarada la dhigo waa sida ku qoran calaamadda badeecada iyo tubada si adag ayaa loo xiraa, badeecada waxaa lagu kaydin karaa ilaa bilaha 6 laga bilaabo taariikhda rasiidka. QIIMAYNTA: Waxaan ku talineynaa in xalalka saamiga ah, marka la diyaariyo, lagu kaydiyo alaabo lagu xiray vialsat-20 ° C ama ka hooseeya loona isticmaalo gudaha 1 bishii. Dhammaan xalliyadaha suurtogalka ah waa in la sameeyaa oo loo isticmaalo isla maalintaas.
4.Howuu JW 642 u shaqeeyaa?
JW 642 waa lafo-kac iyo xooggan oo lakala leh monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC = 3.7 nM). Bandhiga> 1000-xulasho xulasho MAGL ah oo ku saabsan dufanka saliidda amidhydrolase (IC = 20.6 μM). Lacagtada Monoacylglycerol lipase (MAGL) Isa serine hydrolase oo mas'uul ka ah hidrolisyada 2-AG si loo daweeyo astaamaha iyo glycerol, sidaas oo ay joojiso hawsheeda nafleyda. Saameynta Tiknoolajiyada waxaa laga yaabaa inay sababto sida hoos ku qoran: Methyl Acetate - Macluumaadka sunta: Laluntu LD50 (rat):> 5,000 mg / kg; Oral LD50 (bakaylaha): 3,705 mg / kg; Maqaarka LD50 (bakeen):> 5,000 mg / kg; Neefsashada TCLO (bini-aadan): 15,000 mg / m3; Methyl Acetate - Xogta Cuncunka: Maqaarka (bakaylaha): 500 mg (24h) khafiif ah; Indhaha (bakay): 100 mg (24h) dhexdhexaad ah.
I.Stability iyo falcelinta
Xasilloon marka la raaco xaaladaha gaadiidka ama kaydinta.
5.2 Degganaanta kiimikada
Deganaanshaha xaaladaha kaydinta lagu taliyey.
5.3 Waxay u egtahay falcelinta halista ah
Dareen-celinta halista ah kuma dhacayso xaaladaha gaadiidka caadiga ah ama kaydinta. Qalalaasuhu wuxuu ka dhici karaa shuruudaha ama shayada hoos ku xusan.
5.4 Shuruudaha looga hortago kulaylka, qoyaanka.
5.5 Qalabka aan la dabooli Karin
Asaasabyo / alkalis, xoogaa oksidis / yareynaya walxaha.
5.6 Alaabta sunta halista ah
Gubashada waxaa laga yaabaa inay soo baxdo qiiqa sunta ah. Macluumaad aan kala go 'laheyn.
II.Hannaanka iyo kaydinta
5.1 Taxaddir ku saabsan maareynta amniga
Isticmaal daboolka kiimikada kiimikada, oo leh hawo ay bixiso nidaam madaxbannaan. Iska ilaali neefsashada, taabashada indhaha, maqaarka iyo
dhar Ka fogow dhismaha boodhka iyo aerosolooyinka. Isticmaal aag hawo wanaagsan leh. Ka fogow ilaha dabka. Ka fogow
soo-gaadhista dheeraadka ah ama soo noqnoqoshada.
5.2 Shuruudaha loogu talagalay kaydinta amaan, oo ay ku jiraan wax kasta oo khaldan.
Ku kaydi meel qabow, si fiican u hawo leh. Ka fogow qorraxda tooska ah. Ku hayn weel si adag u xir ilaa inta la isticmaalayo.
Heerka kaydinta lagu taliyey: Ku kaydi -20 ° C
5.3 Isticmaalka dhamaadka khaaska ah
Isticmaal koodhadhka foorida shaybaarka haddii ay macquul tahay.
6.JW 642 Khamiis Cusub:
7.JW 642 Cuntada Xashiishka Khamri:
Suuqa 8.JW 642:
9.Daawooyinka JW 642 Wax Saameyn Leh Ah
Qalabka waxaa laga yaabaa in uu xoqo xuubka xuubka iyo wadnaha neefta sare; Waxaa dhici karta in uu waxyeelo ku yahay neefsasho, cunid, ama maqaarka maqaarka; Waxaa laga yaabaa in ay sababto da ' Waxay keeni kartaa maqaarka ama habka neefsashada. Soo-noqoshada soo noq-noqoshada ayaa sababi karta qallajin maqaarka ama dillaac.
Xakameynta shucaaca / ilaalinta shakhsi ahaaneed
Xaddaha Xakamaynta 9.1
Qaybaha leh xakamaynta xakamaynta goobta shaqada
Ma jiraan wax walxo leh qiime xadidnaanta shaqaynta.
9.2 Xakamayntu marayso
Maareynta injineernimada ku haboon
Isticmaal daboolka dufanka halkan ku haboon. Hubi dhammaan tallaabooyinka injineernimada lagu sharraxay qeybta 7 ee SDS.
U hubso in shaybaaradu ay ku jirto qalabka qubayska iyo rugta dhaqidda indhaha.
Qalabka ilaalinta shakhsiyeed
Ilaalinta indhaha / wajiga
Isticmaal muraayadaha ammaanka ee habboon.
Isticmaal galoofyada adkeysiga u adkeysta kiimikada (ugu yaraan isticmaalka shuruudaha BS EN 374: 2003). Koofiyadu waa inay ahaadaan
ka hor inta aan la isticmaalin. Dhaq gacmaha si fiican u dhaqdhaqaaq ka dib markaad taabato.
Xiro dhar ku haboon.
Haddii qiimeynta khatarta ay muujinayso lagama maarmaanka u ah, isticmaal maskax ku habboon.
al kuwa kale
IV. Sida loo iibsado JW 642 ka soo AASraw?
Noqo kuwa ugu horreeya ee dib u eega "JW 642" Cancel reply
Cambogia Garcinia budada ah
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa ee Armodafinil
Maury Cheskes on Burburinta miisaanka ugu fiican: Budada Sibutramine (Meridia)
admin, admin on Xiddiga ugu sareeya 10 aduunka ee ugu fiican ee lagu iibiyo miisaanka budada
Marshall on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet
Felix on 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet